Faah faahino dheeraad ah oo ku saabsan qasaarihii Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalkii Baar-Sanguuni “Dhageyso” – Radio Muqdisho
Faah faahino dheeraad ah oo ku saabsan qasaarihii Al-Shabaab ka soo gaaray dagaalkii Baar-Sanguuni “Dhageyso”
in Barnaamijyada, Wararka, Wareysiyada
Taliyaha Ciidanka Danab ee Jubbooyinka Xasan Maxamed Aadan ayaa sheegay in weerarkii maleeshiyaadka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Baar-Sanguuni lagu jebiyay maleeshiyaadkii weerarka soo qaaday.
Taliyaha oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in maleeshiyada Shabaab ay isku dayeen inay weerar qaraxyo ay ku soo galaan xerada ciidanka balse ay iska caabiyeen ciidamada Xoogga Dalka, kaasi oo khasaare loogu geystay maleeshiyada Al-Shabaab.
“Xalay Sagaal saac iyo bar ayuu dagaalku ka dhacay Baar-Sanguuni, halkaasi oo ay deganyihiin ciidamada Federaalka iyo kuwa Jubbaland, labo baabuur qarax ah ayay wateen, ciidamaduna wey fashiliyeen, kadib dagaal culus ayaa goobta ka dhacay, waana la iska caabiyay, anagu labo ayaa naga shahiiday iyo saddex dhaawac ah” ayuu yiri Taliyaha.
Taliyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dagaal qorsheysan oo rogaal celis ah lagu qaaday fariisimada maleeshiyaadka Al-Shabaab kaasi oo isugu jiray duqeyn xagga cirka ah iyo mid lugta ah, isagoo tilmaamay in laga dilay ku dhawaad 90 maleeshiyo ah, lagana saaray ilaa iyo saddex goob oo ay ku qaadi jireen lacago baad ah.
Maamulka Gobolka Banaadir oo Xariga ka jaray Sheybaar lagu baarayo tayada qalabka dhismaha Guryaha “SAWIRRO”